Isingeniso: Indlela eyodwa bamba wumkhakha mechanical ukufeza umsebenzi self-bamba. Kuyinto ingxenye eyisisekelo drive electromechanical ngokusebenzisa ushintsho ijubane noma Ukujikeleza isiqondiso izingxenye ezisebenzayo noma uyishayele. Ifomu uxhumano uhlukaniswe: uxhumano ukhiye, umshudo uxhumano, uxhumano isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo, uchungechunge isondo uxhumano, njll .. umsebenzi wayo lomkhulu ukuvimbela reverse, ukubeka olunembile, torque ukudluliswa noma ukusika torque engu. Ngakho-ke, obizwa nangokuthi backstop yayo noma eyodwa eziveza ...
Indlela eyodwa bamba wumkhakha mechanical ukufeza umsebenzi self-bamba. Kuyinto ingxenye eyisisekelo drive electromechanical ngokusebenzisa ushintsho ijubane noma Ukujikeleza isiqondiso izingxenye ezisebenzayo noma uyishayele. Ifomu uxhumano uhlukaniswe: uxhumano ukhiye, umshudo uxhumano, uxhumano isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo, uchungechunge isondo uxhumano, njll .. umsebenzi wayo lomkhulu ukuvimbela reverse, ukubeka olunembile, torque ukudluliswa noma ukusika torque engu. Ngakho-ke, yayo ebizwa nangokuthi backstop noma eyodwa amabombo.
Isicelo: auto automatic transmission isithuthuthu isiqalo kagesi, umshini amathuluzi, emaphaketheni imishini, ukuphrinta imishini, ukukhanya nemishini kanye nezinye ukudluliswa lokukhanda.
Olandelayo: Aluminium ibhola
Clutch Ukuze Motorcycle
ezidwetshwe Cup Roller Clutch
Sprag Clutch Amabombo